Platzi: The ikpo okwu doro anya iji mụta banyere teknụzụ (Ahụmịhe m) | Site na Linux
Luigys toro | | Apụta, GNU / Linux, Mmemme, Na-atụ aro
Echere m na mmụta na-aga n'ihu bụ usoro kachasị mkpa nke ụmụ mmadụ, anyị na-amụta site n'oge amụrụ anyị ruo mgbe anyị nwụrụ na ọ ga-abụrịrị iwu gbasara omume ịgbalị ịmụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị. Taa, inweta agụmakwụkwọ na mpaghara ọ bụla abụrụla onye ọchịchị onye kwuo uche ya, Mahadum, ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ abụrụla usoro nzere ntozu, ebe ọtụtụ ihe ọmụma enwetawo site na isi mmalite dị iche iche, na-abụkarị n'ụzọ na-enweghị isi na enweghị usoro. ndị ọzọ n'ụkpụrụ ahaziri ahazi, usoro na ntọala siri ike.
Ihe ndị a niile emeela ka e nwee ọtụtụ nyiwe lekwasịrị anya na mmụtaOffọdụ n'ime ha bụ ndị nweere onwe ha, n'efu, nke onwe ha, na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ naanị ngwakọ, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, ọtụtụ n'ime ha na-ekwe ka ọtụtụ ndị ọzọ zụọ nke ọma iji zụọ ahịa, aka ọrụ ma ọ bụ ọkachamara na mpaghara dị oke mkpa. . Enwere m onwe m na ọtụtụ n'ime nyiwe ndị a, nke ọ bụla n'ime ha enyela m ọtụtụ ihe ọmụma, mana na-atụghị ụjọ na m ga-ezighi ezi, Platzi bụ onye tinyeworo aka na ndụ m.
1 Gịnị bụ Platzi?
2 Kedu otu esi amụta Linux na Platzi ma nweta asambodo?
3 Kedu otu esi amuta ihe omume n'efu na Platzi?
4 Mara agbụrụ Raczi?
5 Nweta akwukwo maka otu ọnwa nke omumu na Platzi
Gịnị bụ Platzi?
Platzi bụ usoro mmụta ntanetị Na m na-atụle oke obi ụtọ, nke bara uru na nke ọkachamara, nke na-elekwasị anya n'inyere ụmụ akwụkwọ aka inweta ihe ọmụma nke na-enye ha ohere ị nweta ndozi dị ukwuu gbasara ụgwọ ọnwa ha, ọnọdụ ọrụ ma ọ bụ ikike ha iji melite ma ọ bụ mepụta ụlọ ọrụ nke aka ha.
Platzi na-atụgharịkarị na agụmakwụkwọ metụtara teknụzụ mana ọ bụchaghị ihe jikọrọ ya na mmemme, ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ dị iche iche na usoro ọmụmụ ga-enyere anyị aka ịmụta site na imepụta ọdịdị zuru oke nke onwe anyị iji mepụta ngwa nke nrọ anyị, site na ịmụ usoro dị mkpa iji nye ndụ n'echiche anyị, na-eme ka ọ dị elu ụlọ ọrụ anyị, mepee ma mepụta ngwaahịa anyị, wepụta azịza anyị ma ọ bụ naanị nyere anyị aka ịnụ ụtọ mgbe anyị na-eme anwansi ma ọ bụ ihe nwere ike ịsị ya, na mmemme.
Ihe ikpo okwu a nwere ihe karịrị 100 ọmụmụ na ọrụ 24, ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 100000 na-amụ banyere web na ngwa mmepe, ịre ahịa n'ịntanetị, imewe interface, sava, n'etiti ndị ọzọ, ndị na-eji ikpo okwu gburugburu a pụtara ifịk obodo, nke zuo ezu mmụta na Live na Recorded Klas kụziiri site ọkachamara ụlọ ọrụ.
Ihe ịga nke ọma nke Platzi, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ ike ya iji mee ka ụmụ akwụkwọ ya nwee ike, site na mmụta mmụta maka ọha na eze na ọdịnaya mara mma ma baa uru, yana usoro nkuzi dị mfe ma na-atọ ụtọ, mana karịa ihe niile. N'otu aka ahụ, ikpo okwu nwere ọkwa dị elu nke gafere 70%, nke pụtara na Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ na-anwa ịmụrụ akwụkwọ na Platzi na-agwụcha akwụkwọ ndị a chọrọ, ihe dị ezigbo mkpa na ọha mmadụ nwere ọtụtụ ụzọ ọzọ ma ọ dị nwute na ọ na-esiri ya ike ịkọwa ebumnobi.
Kedu otu esi amụta Linux na Platzi ma nweta asambodo?
Ihe mbu m mere mgbe m bidoro na Platzi bụ ime ya Usoro nchịkwa Linux Server, nke ha na-enye anyị ezigbo ihe kpatara anyị ji eji Linux na sava, na-akụziri anyị ka anyị mepụta nhazi dị elu yana dị elu, dịka nhazi mbụ, nhazi mmemme, nkebi na njikwa buut, omume dị iche iche iji jikwaa sava ahụ nke ọma , inye ọrụ, nlekota na nkwado ndabere, yana agụmakwụkwọ Linux dị elu.
A na-ekeji usoro a na vidiyo dị iche iche nke sitere na isi mmalite na-atọ ụtọ, ihe m masịrị m karịsịa, bụ na n'ime nkuzi niile enwere ihe ịma aka nke ụmụ akwụkwọ ga-emeri yana nke na-enye ohere ịme ka ihe ọmụma ahụ nweta.
Ná ngwụsị nke usoro ahụ, anyị nwere ike ịga akwụkwọ asambodo, nke ga-ekwe nkwa ihe ọmụma enwetara na nke nwere nkwado nke Platzi.
Kedu otu esi amuta ihe omume n'efu na Platzi?
Usoro a na-amalite site na ihe atụ dị mfe dị ka ịmịpụta anya na ihe nchọgharị anyị yana nkọwa zuru ezu mana n'ụzọ ọhụụ nke otu esi eme ka nke a mee, mgbe ahụ ọ na-enye anyị nlegharị anya nke arụmọrụ na iwu mmemme mmemme wee banye anyị. dozie mmemme mmemme isii nke ga - enyere anyị aka, gụnyere ihe ndị ọzọ, ịgbakọ ibu anyị na mbara ụwa ọzọ (dịka ọnọdụ nke ike nke onye ọ bụla n'ime ha), see na Kanvas nwere akụ keyboard, mepụta ntọala maka egwuregwu vidiyo nke anyị, gbakọọ nsogbu ndị nkịtị. dị ka fizzbuzz a ma ama, mepụta igwe ndọrọ ego ma ọ bụ nwee ọ makingụ ịme ngwa ahịa ihe nkesa dị elu.
Ọ bụrụ n’ịmụtaghị mmemme Mmemme Programming nke Platzi, m ji aka gị na-agwa gị na ọ ga-esiri gị ike ịmụ ihe mmemme, ọ dị mfe ma doo anya, yana ihe atụ dị mgbagwoju anya yana azịza dị mfe.
Otu enyemaka ọzọ m nwere ike ikwu bụ ka ị jiri ụzọ mmụta, otu nke m na-atụ aro maka ọmụmaatụ maka ndị chọrọ ịmụ ihe mmemme na Linux, bụ ihe ndị a:
Mara agbụrụ Raczi?
Platzi na-ekwusi ike a Career atụmatụ na otu otu usoro ọmụmụ site na mpaghara dị iche iche, site na ịgafe ọrụ anyị nwetara ọtụtụ ihe ọmụma ga-enyere anyị aka ịtụle onwe anyị ọkachamara na mpaghara ahụ, dịka ọmụmaatụ, ịgafe ọrụ nke Nchịkwa Server na DevOps ị ga-enwerịrị kwadoro usoro nke Okwu Mmalite na njedebe na usoro iwu, Nchịkwa nke Nchịkwa nke Linux Servers, Ọzụzụ ọkachamara nke DevOps, Agụmakwụkwọ nke Ntugharị na Ọrụ Ntanetị Amazon, Agụmakwụkwọ nke Azure laaS, Agụmakwụkwọ nke Azure PaaS, Agụmakwụkwọ nke DigitalOcean, Course of Deploy with Now.sh, Ngwa Architecture Agụmakwụkwọ na Docker na usoro IBM Cloud Fundamentals ọhụrụ, ya bụ, anyị ga-enwe ọtụtụ ihe ọmụma na mgbagwoju anya na mpaghara ahụ, nke dabara n'ọtụtụ ọnọdụ na ogo mahadum.
Ugbu a, Platzi na-enye ọrụ ndị a:
Programming Isi Degree
Kwado mmepe na PHP
Mmepe na Java
Ihe owuwu nke n'ihu
Apple Fullstack Onye Mmepụta
Android Ngwa Development
Kwado mmepe na Ruby
Ahịa na Digital Strategy
Nkesa Server na DevOps
Mmepe Ngwa na ASP.NET
Nnukwu data na sayensị data
Dabere na mmepe na Python
Arficial ọgụgụ isi
Ngwaahịa Ngwaahịa Digital na UX
Dabere na mmepe na GO
Mmepe na WordPress
Ihe okike mmalite
Na-etolite na Mmeghachi Omume
Ahịa Dabere na Ahịa
Ofntanetị nke Ihe
Mgbe emechara na nkwado nke ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ Platzi na-enye gị asambodo dị ka nke a:
Nweta akwukwo maka otu ọnwa nke omumu na Platzi
Nke mbụ, ịgwa gị na platzi na-enye 5 ihe ọmụmụ dị oke mkpa dị ka nke a Agụmakwụkwọ Git na GitHub, Usoro Nlekọta Ihe Nlere, Olu na Olu Azụmaahịa, Usoro Ntinye nke Onwe, na Usoro Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ.
Na mgbakwunye na nkuzi ndị a kpọtụrụ aha n'elu, Platzi na-enye atụmatụ nkuzi kwa ọnwa na kwa afọ ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ usoro ọmụmụ na ọrụ ndị ọkachamara sitere na ụlọ ọrụ kachasị mkpa. Oge a anyị na-enye gị a beca otu ọnwa na platzi Ka ị wee chọpụta usoro ọmụmụ niile ị nwere ike ịmụ n'ịntanetị, banye ebe a wee soro usoro ndị egosiri, n'otu aka ahụ anyị ga-agbakọtakwa ọnwa maka ndị ọrụ ahụ sonyere, mmeri mmeri.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe doro anya nye onye ọ bụla, ana m atụ aro ka a kụziere m onwe m ma mụta site na usoro dị iche iche nke ịntanetị na-enye anyị, agbanyeghị, Platzi bụ usoro ahụ, usoro bara uru ma dị mma iji mụta banyere nke m gwara gị ọtụtụ oge, ọ baara m uru nke ukwuu dị ka m maara teknụzụ ọhụrụ ma na-egosipụta echiche m nke ọma. Ihe m ga - eme ka ọ mata banyere Platzi bụ na site na oge mbụ ọ na - akpali gị ime ka echiche azụmaahịa gị mezuo, ya bụ, ọ na - akpali anyị ka anyị bụrụ ndị ọchụnta ego na inwe ọkaibe ọkachamara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Platzi: Nzuzo doro anya iji mụta banyere teknụzụ (Ahụmahụ m)
Daalụ maka ọkwa PLATZY.
Na post ị na-egosi na enwere ụfọdụ nkuzi n'efu dị ka akara aka gị. Ọfọn, ọ dịghị onye maka n'efu ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ahụghị m. Y’oburu n’inwe obi oma ka ighaputa otu esi enweta akwukwo n’efu (olile anya amaghi m na i gha akwu ugwo obula tupu i banye na nke efu).
Ekele m na ekele.
Zaghachi LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
Lee ụfọdụ ihe atụ
Jenesis camacho dijo
M na-eme ụdị nke ahụ ma ọ bụrụ na enweghị Luis.
Zaghachi Genesis Camacho
M ga-ahapụ ọkwa a ma aga m nwayọ
Platzi bụ ihe kacha mma n'ụwa n'ụwa agụmakwụkwọ Online !!!! Aga m akwụ puku ndenye aha, n'ihi na ọdịnaya ya dị mma yana ikpo okwu ya dị oke oke !!!!
Ezi nbanye ezigbo, gaa n'ihu, hụ gị n'elu. 😉
Usoro ọmụmụ Platzi anaghị anọchite ọnụ ahịa nke ọnụ ọgụgụ akụ na ụba, ogo dị ala nke ndị ngosi ahụ.
N'okwu m, ekwenyere m na nke ahụ, ọnụahịa nke ọmụmụ ahụ dị m ka nke kachasị mma, na-eche na diplọma ruru 10 ma ọ bụ 20 ugboro karịa na otu ọnwa enwere m ike ịhụ ọtụtụ n'otu oge maka ọnụego dị larịị.
Kedu ụdị ahịa, ego ole ka akwụrụ ụgwọ maka edemede ahụ? Ọ na-egosi oke enyi.
Zaghachi Anakin SW
Ọfọn, ọ dịghị ihe, m na-amụ na ya, ma ọ bụrụ na ị tinye akwụkwọ na Scholarship ha nyere m otu ọnwa nke Scholarship dị ka ọ na-ekwu n'isiokwu ahụ, mana ma e wezụga nke ahụ, Platzi bụ ikpo okwu na-ejere m ozi nke ukwuu n'ụbọchị m kwa ụbọchị o meela ka anyị mata ọtụtụ ihe gbasara teknụzụ.
Anaghị m ekerịta echiche ahụ, anaghị m ekwu na ndị nkuzi Platzi amaghị, maka na ha nwere ike mara ọtụtụ. Ma ha enweghị ihe ọmụma iji kụzie ihe, ha na-akọwakarị n'ụzọ dị irè, ha na-agwa gị ihe ị ga-eme maka ihe dị otu a na ugbu a, mana ọ bụghị n'ihu. Havekwesịrị ịhazi ọzọ. Onwe m, echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ, dịka ọmụmaatụ, ịmụta ịmụ mmemme n'emeghị echiche ọ bụla, ọ kachasị mma ịgụ akwụkwọ, ntụaka, wdg.
PS: ọ dị ka erere m post ahụ, enwere m olileanya na m hiere ụzọ.
Ọdịdị dị elu nke ọmụmụ ihe ahụ, ndị nkuzi na-emehie ihe n'okwu, ụfọdụ ọbụlagodi na ihe ndị bụ isi, agụmakwụkwọ ejirila ịmụ asụsụ n'ozuzu (n'ihi na m na-agụ akwụkwọ ahụ ma m na-amụ ngwa ngwa).
N'uche m edx ka mma, asambodo ahụ dị oke ọnụ ma na ha n'ozuzu na Bekee, mana ogo ọmụmụ na ndị nkuzi ha na isiokwu dịgasị iche iche dị elu.
Zaghachi Felipe Rodríguez
ezigbo onyinye, daalụ… ¡¡¡¡¡
Zaghachi Jose Bernardoni
Akpịrị ịkpọ nkụ dijo
Isiokwu na-akpali. Asụsụ ọjọọ jọgburu onwe ya, mana ọ na-atọ ụtọ ọ bụla.
Nyochaa dịka ọmụmaatụ paragraf na-esonụ, biko:
"Ọ bụrụ na ịmụtaghị ịhazi mmemme n'usoro ihe omume nke Platzi Basic Programming Course, m n'onwe m na-agwa gị na ọ ga-esiri gị ike ịmụ ihe mmemme, ọ dị mfe ma doo anya, yana ihe atụ dị mgbagwoju anya na azịza dị mfe."
Enwere m obere ajụjụ, ọnwa mbụ bụ n'efu ma mgbe ọnwa ahụ gachara ịkwụ ụgwọ mbụ?
Echere m na ị ga-akwụ ụgwọ otu ọnwa iji nweta ọnwa ọzọ n'efu.
Ga-akwụ ụgwọ ọnwa mbụ, na nke abụọ bụ free
Ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa, ị nwere ike ịgbanwe usoro ịkwụ ụgwọ n'ọdịnihu?
N'ezie, dịka m maara, ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ otu ọnwa na ọnwa ahụ ị kpebiri ịgafe n'afọ ahụ, ha ga-amata ego ị kwụrụ maka ọnwa ahụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido n'ụwa nke teknụzụ ma ịchọrọ ịzụlite, ibe a dị mma iji mụta mmemme http://www.w3ii.com
Peeji n'onwe ya di nma, echere m na obu ezi ihe iji muta echiche ohuru. Ọ bụ ezie na ịnwe nzere / asambodo yiri ka ọ bụụrụ m obere olu, ebe ọ bụ na ịnwere ike ịnwale ule ọtụtụ oge ịchọrọ.
Zaghachi na davidcrx
Saịtị ahụ dị mma, ị na-amụta ihe ndị bụ isi mana ị ga-anọ ebe ahụ. Amụtara m mmemme na Go na https://apuntes.de/golang ma ugbu a, m na-amụta React.
Esi mpikota onu na decompress faịlụ na Linux
Esi melite Nwanna laser na-ebi akwụkwọ na Linux